Toyota Mark II 2000 (#694019) ကို Poke Ba Thi Ri ၿမိဳ့နယ္... | CarsDB
Lot Number: #694019
oyota Mark2 ရွှေငါး အက္ခရာမြင့် ပါးဝိုက် 2tone ကာလာလေး။
Engine. 2500cc witj Eco mode
(Eco mode ပါသဖြင့်ဆီစားနှုန်း.
လိုင်စင်. 7I/**** MDY လိုင်စင်.(လိုင်စင်စစ်ဆေးပြီး ဝယ်ယူသူမှ ထပ်မှန်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
Tv & Back camera. ထိုင်ခုံမော်တာ seat motor 1.
မှန်ချိုး၊မှန်ခေါက်။နောက်လက်တင်။အမှိုက်ပုံး။ကားအတိုက်အခိုက်ရှင်းပါသည်။တာယာလေးလုံး 95%ကောင်းပါသည်။ အဂျင်္င်ဝိုင် အသစ်လဲပြီးဖြစ်ပါသည်။
။မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပက်သက်၍ အပြည့်အဝ တာဝန်ယူပါသည်။သက်ဆိုင်ရာကညန ရုံးတွင်လည်း မော်တော်ယာဉ်မှန်၊မမှန်ကိုလည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။,Good Condition,Price is negotiable. ***CarsDB တွင်ကြော်ငြာတင်ထားသောကားဟုပြောကာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်***
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Arkar Min မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Mark II 2000 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။